သင်က Paypal ကိုသုံးပါပြီးတော့ဒါ့အပြင် Clickfunnels နှင့်အတူအတူတကွခံရသောဒဏ်ချက်အားနိုင်သလား - အဆိုပါနေ့၏ကတော့
သင်သည်သင်၏ web-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်ကြသည်နှင့်အသင်သည်သင်၏န်ဆောင်မှုအတွက်ပေးချေဖို့လူရွေးစရာများရှိပါစေရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ကောင်းမွန်သောသတင်းဆော့ဖ်ဝဲကတည်းကသင်သည်တတ်နိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အနည်းဆုံးထောက်ခံပါသည် 15 ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှု gateway များ.
Paypal ပေါင်းထည့်ခြင်း သင်သည်သင်၏ရောင်းချထိန်းညှိတံ့သော parameters များကိုဖန်တီးရန်သင့်အကောင့်မှ setting များကိုအတော်များများနှင့်ကတော့သင်၏အထဲမှာဝက်ဘ်စာမျက်နှာနှင့်အလုပ်အတွက်ခလုတ်တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးင်.
အစင်းပေါင်းစည်းမှု ယင်း၏လမ်းသင်ရုံသင့်ရဲ့ Clickfunnels တစ်ဦးထံမှပေါင်းစည်းမှု link ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကတည်းကပိုမိုလွယ်ကူသည်သင်၏ Stripe ဟာရန်အကောင့်များနှင့်သူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးတခုတခုအပေါ်မှာခွင့်ပြုချက်ဖြစ်စဉ်ကိုနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမကိုအမှီဖွင့်လှစ်.
အောက်မှာ Filed: Clickfunnels, Marketing Automation အတူ Tagged: can you use paypal and also stripe together with clickfunnels